‘द लिडर’को चर्चा देशभर आलोचना र समर्थन उतिकै « Swadesh Nepal
प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार
न्यूज २४ टेलिभिजनबाट नयाँ ‘रियालिटी शो’ कार्यक्रम ‘द लिडर’ संचालन हुने भए पछि देशभर यसको चर्चा चुलिएको छ। नेतृत्व गर्न सक्ने एक सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु हुन लागेको कार्यक्रमको काठमाडौंमा विहीबार एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरिएको हो ।
न्यूज २४ टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने यो कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की र साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई निर्णायकका भूमिकामा राखिएको छ। यस्तै अन्य दुइ निर्णायकलाई जनताको चाहना अनुसार राखिने भएको छ।
जनताले आफ्नो राय सामाजिक सञ्जाल मार्फत राख्ने छन्। अहिले सम्म सामाजिक सञ्जालमा आएका रायमा सबैभन्दा बढी प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीको नाम आएको छ। निडर भएर बोल्ने सैली भएका डा. केसी ताप्लेजुङमा जन्मिएर करिब तीन दशकदेखि प्राध्यापनमा सक्रिय छन्। राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिएका उनका झण्डै दुई दर्जन पुस्तक, ६ सयभन्दा बढी लेख रचना प्रकाशित छन्। अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्राजुएट गरेका डा. केसी खरो विचारका लागि प्रख्यात छन्।
उनि संगै बरिष्ठ अधिबक्ता डा. युवराज संग्रौलाको पनि नाम धेरै देखिएको छ। पाँचथरमा जन्मिएका प्रा. डा. युवराज संग्रौला तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुन बिषयमा प्राध्यापन गर्दै आउनु भएको छ । कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गरेका बहुआयामिक व्यक्तित्व संग्रौला पुर्व महान्यायधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनविद्, राजनीतिक बिश्लेषक, चिन्तक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
नेपालको कानुनी क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्व संग्रौला राजनीति, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, कानुन, राष्ट्रिय सुरक्षा आदिबारे पत्रपत्रिकामा नियमित बिश्लेषण र अनुसन्धानमुलक लेख प्रकाशित गर्दै आएका छन् । चर्चित पुस्तक ‘नि:सङ्कोच अभिव्यक्ति’ का लेखक संग्रौलाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै समसामयिक बिषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्दछन । संग्रौलाले नेपाल नबन्नुका पछाडी यहाँका शासकहरु र राजनैतिक नेतृत्वमा नयाँ सोच र विचारको अभाव तथा बिदेशी खेल रहेको धारणा राख्दै आएका छन् । अव नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ सोच र विचारको टड्कारो आवश्यकता रहेको धारणा उनको रहेको छ। यसैले पनि जनताको चुवाइसमा संग्रौला परेका हुन्।
यता रियालिटी शो गर्ने टिमले छानेका निर्णायक मध्य डा बाबुराम भट्टराईलाई निर्णयको भूमिकामा नराख्न पनि उतिकै मात्रामा सल्लाह सुझाब आएका छन्। न्यूज २४ टेलिभिजनको अनलाइन संसकरणमा ‘रियालिटी शो’ ‘द लिडर’को बारेमा समाचार बाहिरिए संगै डा. भट्टराईलाई निर्णयकको भूमिकामा नराख्न सुझाबहरु आएका छन्।
यस्तै निर्णायक मण्डल मध्यका एक रबिन्द्र मिश्रलाई पनि निर्णायक मण्डलमा नराख्न सुझाव अत्याधिक आएको छ। राजनीति सँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएकोले राजनीतिक पार्टीका मानिस हरु कार्यक्रमको निर्णायक भूमिकामा नराख्न सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै सुझाब आएका छन्।
देशका विभिन्न शहरमा अडिसन हुने भनिएको रियालिटी शोको देश बाहिर पनि अडिसन हुने बताइएको छ । यस रियालिटी शो कार्यक्रमका विजेताले काठमाडौँमा एक सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट, कार, २० लाख नगद र राजनीतिमा नेतृत्व लिने अवसर पाउने जनाइएको छ। कार्यक्रमको प्रस्तोताको रुपमा चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले गर्ने भएका छन् ।